ERD မှ Database ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းခြင်း ｜ BLOG｜May Myanmar Lin Web Development | Web Development Myanmar, Mobile Responsible App Development, Myanmar web design and Web development, Myanmar web app development, Search engine optimization, Software development, Online shopping Platform development
ERD မှ Database ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းခြင်း
Database တစ်ခု ဖွဲစည်း တည်ဆောက်တော့မယ် ဆိုရင် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရေးဆွဲ ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ် database တည်ဆောက်မည့် business area ရဲ့ logical ပိုင်းကို စာရွက်ပေါ်ကူးဆွဲရတဲ့အပိုင်းပါ။ သူက နည်းပညာပိုင်းထက် business ပိုင်းကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရပါတယ်။ သူ့ကို Conceptual Design ပိုင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ERD တို့ Object Modelling တို့ ပါပါတယ်။
၂။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ အစောပိုင်းက ဆွဲထားတဲ့ logical model တွေနဲ့ ကိုယ့် DBMS မှာ သုံးမည့် Data model (များသောအားဖြင့်တော့ Relational Data model တွေပါ) တွေနဲ့ အပ်ဆက်မိအောင် လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပါ။ Normalization ဆိုတာ ဒီအပိုင်းမှာပါတာပါ။ Logical Design ပိုင်းပါ။
၃။ နောက်တစ်ခုကတော့ Physical Design ပိုင်းပါ။ သူ့မှာတော့ ကိုယ်သုံးမည့် Database အတွက် အစွမ်းကုန် စဉ်းစားရပါတယ်။ Primary key၊ Foreign key တပ်တာကအစ constraint သုံးတာအလယ် traffic analysis အဆုံး အကုန် စဉ်းစားရပါတယ်။
အခုကျွန်တော် ရေးချင်တဲ့အကြောင်းက ERD လို့ခေါ်တဲ့ Entity Relationship Diagram ကနေ Database ပေါ်ကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းပါ။ အောက်မှာ ကျွန်တော် ERD ပုံတစ်ပုံဆွဲပြထားပါတယ်။ Chen ရဲ့ method နဲ့ဆွဲတာပါ။ ဘာလို့ chen ရဲ့ method လို့ထည့်ပြောရသလဲဆိုရင် ERD ဆွဲနည်း အဖုံဖုံရှိပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆင်တာတွေတူတာတွေ ရှိသလို တော်တော် ကွဲပြားတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။
ခရီးသွား ကားငှားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဆွဲပြထားတာပါ။
သူ့မှာ ကား စာရင်းတွေမှတ်ထားပါတယ်။ ကားတွေမှာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Farm တွေ (ဆိုလိုတာ ယာဉ်လိုင်းတွေ) ရှိသလို တစ်ချို့ ကိုယ်ပိုင်ကားကို register လုပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ရှိမှာပါ။ အချို့ vehicle record တွေဟာ vehicle farm record တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှု (Relationship) မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
Customer စာရင်းတွေလည်း မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒိ customer စာရင်းဆိုတာ customer တစ်ယောက်ဟာ reservation တစ်ခု စလုပ်မှ မှတ်ထားတာမို့လို့ customer တိုင်းဟာ reservation ရှိတယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။ (ဒီမှာ တစ်ခု စဉ်းစားရမှာက customer တစ်ယောက်ဟာ ခရီးတစ်ခုအတွက် ကား ၁စီးထက်ပိုငှားခဲ့ရင် ငှားတဲ့ ကားအရေအတွက်အလိုက် reservation မှတ်ထားတယ်လို့ ယူဆပေးထားပါ)
အဲဒါကြောင့် Reservation တစ်ခုအတွက်ကို တကယ်ငှားတဲ့ Hire တစ်ခုဘဲ ထွက်လာမှာပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဆွဲထားတဲ့ ERD ကို နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ERD ကနေ Database ကို စပြောင်းကြည့်ရအောင်။
၁။ ။ER Diagram ထဲမှာပါနေတဲ့ Entity တိုင်းဟာ Database မှာ Table တွေအနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားပါမယ်။ အပေါ်က ပုံအရဆိုရင် Customer၊ Reservation၊ Hire၊ Vehicle နဲ့ VehicleFarm တွေဟာ Table တွေဖြစ်သွားမှာပါ။
၂။ ။Entity တစ်ခုခြင်းစီမှာရှိတဲ့ attribute တွေက အဲဒိ Table တွေရဲ့ column တွေအနေနဲ့ ဖြစ်သွားပါမယ်။ Underline တားထားတဲ့ attribute တွေဟာ Primarky Key column တွေဖြစ်သွားမှာပါ။ အပေါ်ဥပမာအရဆို ဒီလို Table တွေထွက်လာမှာပါ။
Customer (CustomerID, Name, Contact) Reservation (CustomerID,VehicleID, ReservationDate, HireDate, RequestPeriod) Hire (HireID, ReservationID, HireDate, ReturnDate, VehicleID) Vehicle (VehicleID, CarNo, FarmID, Status) VehicleFarm (FarmID, Location, ContactNo)
Customer (CustomerID, Name, Contact)
Reservation (CustomerID,VehicleID, ReservationDate, HireDate, RequestPeriod)
Hire (HireID, ReservationID, HireDate, ReturnDate, VehicleID)
Vehicle (VehicleID, CarNo, FarmID, Status)
VehicleFarm (FarmID, Location, ContactNo)
၃။ ။ Foreign key နဲပါတ်သက်ပြီးရေးရရင် relationship တစ်ခုမှာ one end ရှိတဲ့ entity ထဲမှာရှိတဲ့ primary key က many end ဖက်မှာရှိတဲ့ entity အတွင်းမှာ foreign key အနေနဲ့ ဝင်သွားပါတယ်။ one-to-one relationship တွေမှာတော့ foreign key ကို ဘယ်ဖက်ထားထားရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ Reservation ဖြစ်ပြီးမှ Hire ဖြစ်တာမို့လို့ Hire ဖက်မှာ Reservation ရဲ့ primary key ကိုထားလိုက်ပါတယ်။
၄။ ။ နောက်တစ်ခုက optionality နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောရရင် one end ဖက်မှာ optionality ရှိနေခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် စဉ်းစားစရာ တစ်ခုပိုလာပါမယ်။ ဒီ diagram မှာဆိုရင် vehicle နဲ့ VehicleFarm တို့ရဲ့ relationship ကို စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေသအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ one end ဖက်မှာ optionality ရှိနေခဲ့ရင် many end ဖက်က foreign key ကို not null ပေးလို့ မရပါဘူး။
Vehicle Table တည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင် FirmID NOT NULL လို့ပေးလို့မရပါဘူး။ Vehicle Table ရဲ့ Create Table statement ကိုပြပါမယ်။
CREATE TABLE Vehicle ( VehicleID NUMBER(6,0), CarNo VARCHAR(25) NOT NULL, FarmID INT NULL, Status VARCHAR(12) NOT NULL PRIMARY KEY(VehicleID) FROEIGN KEY (FarmID) REFERENCES VehicleFarm(FarmID) )
( VehicleID NUMBER(6,0),
CarNo VARCHAR(25) NOT NULL,
FarmID INT NULL,
FROEIGN KEY (FarmID) REFERENCES VehicleFarm(FarmID) )
၅။ ။one-to-one relationship မှာ နှစ်ဖက်လုံး optionality မပါဘူးဆိုရင် foreign key ပေးထားတဲ့ column ကို UNIQUE ပေးလို့ရပါတယ်။ Hire Table ရဲ့ Create table statement ပါ
CREATE TABLE Hire (HireID NUMBER(6,0), ReservationID NUMBER(6,0) UNIQUE NOT NULL, HireDate DATETIME NOT NULL, ReturnDate DATETIME, VehicleID NUMBER(6,0) PRIMARY KEY(HireID) FOREIGN KEY(ReservationID) REFERENCES Reservation(ReservationID), FOREIGN KEY(VehicleID) REFERENCES Verhicle(VehicleID) )
ReservationID NUMBER(6,0) UNIQUE NOT NULL,
FOREIGN KEY(ReservationID) REFERENCES Reservation(ReservationID),
FOREIGN KEY(VehicleID) REFERENCES Verhicle(VehicleID) )
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ER Diagram ကနေ Database ကို ချွေးမထွက်၊ ခေါင်းမပူဘဲ အေးအေးဆေးဆေးပြောင်းလို့ရပါပြီ။
မူရင်းပို့စ် : ကိုရာဇာ (Saturday, September 03, 2011, 03:09PM)
Reference: Paul Beynon-Davies(1996). Entity Relationship Diagram. Database Systems(Third Edition) SIBN:1-403-91601-2